Kutheni bonwabe kangaka nje aba bantu? Baya kwindibano. Njengabakhonzi bakaThixo bamandulo ababeyalelwa ukuba bahlanganisane kathathu ngonyaka, sikhangela phambili ekubeni kunye njengeqela elikhulu. (Duteronomi 16:16) Nyaka ngamnye, sineendibano ezintathu: Iindibano zesiphaluka ezimbini zosuku olunye nendibano yengingqi yeentsuku ezintathu. Singenelwa njani kwezi ndibano?
Zomeleza ubuzalwana bethu. Kanye njengokuba amaSirayeli ayenandipha ukudumisa uYehova “phakathi kweendimbane ezihlanganiseneyo,” nathi siyakunandipha ukunqula uYehova kwezi zihlandlo zikhethekileyo. (INdumiso 26:12; 111:1) Ezi ndibano zibangela ukuba sidibane namaNgqina akwamanye amabandla okanye akwamanye amazwe. Enye into ebangela uvuyo ngesi sihlandlo lixesha lesidlo sasemini apho sinandipha isidlo kunye kwindawo yendibano. (IZenzo 2:42) Kwezi ndibano sizibonela ngawethu uthando ‘nomanyano lwabazalwana’ abasehlabathini lonke.—1 Petros 2:17.
Ziyasinceda senze inkqubela kwizinto zokomoya. Kwakhona amaSirayeli ayengenelwa ‘ngokuwaqonda amazwi’ eZibhalo awayewaxelelwa. (Nehemiya 8:8, 12) Nathi siyayixabisa imfundiso yeBhayibhile esiyifumana kwezi ndibano. Intetho nganye isekelwe eSibhalweni. Sifunda ukwenza ukuthanda kukaThixo ebomini bethu kwiintetho ezibangel’ umdla, kungcelele lweentetho nakwimiboniso yezinto ezenzekileyo. Siyakhuthazeka xa sisiva amava abantu abahlangabezana ngokuphumelelayo neengxaki zokuba ngumKristu kula maxesha obunzima. Imidlalo yesinxibo samandulo eyenziwa kwiindibano zengingqi ibangela ukuba imfundiso yeBhayibhile iphile size sikwazi ukuyisebenzisa ebomini bethu. Kwindibano nganye kubhaptizwa abo bafuna ukufuzisela uzahlulelo lwabo kuThixo.
Kutheni iindibano zisisihlandlo esibangel’ uvuyo?
Unokungenelwa njani xa uye kwindibano?
Ukuba ufuna ukubazi ngakumbi abazalwana bethu, siyakucela ungaphoswa yindibano elandelayo. Umntu okuqhubela isifundo seBhayibhile uya kukubonisa ucwangciso lwendibano edlulileyo ukuze ubone iintetho ezinikelwayo. Kwikhalenda yakho phawula usuku nendawo eza kuba kuyo indibano elandelayo uze uye ukuba unako.
Funda isizathu sokuba izigidi zabantu emhlabeni wonke zisiya kwesi sihlandlo sikhethekileyo.